Ukulibaziseka kwentetho ebantwaneni | IBezzia
UMaria Jose Roldan | 04/06/2021 23:14 | Yonyana wakho
Eyona nto imbi umzali anokuyenza kukuthelekisa umntwana wakhe nabanye. Umxholo wentetho yenye yezo zifumana uthelekiso oluninzi kwaye uninzi lwabazali alunamonde ngamazwi okuqala omntwana.
Ngokunxulumene nolwimi, amathandabuzo azo zonke iintlobo avela, ngakumbi ezo zihambelana nomzuzu apho omncinci kufuneka aqale ukuthetha kwaye ukuba kukho ukukhathazeka ukuba akayenzi kwiminyaka ethile.
1 Wonke umntwana uyalidinga ixesha lakhe
2 Ngeliphi ixesha kunokubakho ingxaki kwintetho yomntwana
3 Indlela yokukhuthaza ukukhula kolwimi ebantwaneni
Wonke umntwana uyalidinga ixesha lakhe
Abazali mabacaciswe gca ukuba ayingabo bonke abantwana abafanayo kwaye Wonke umntu ufuna ixesha lakhe xa kufikwa ekufundeni ulwimi. Kuyinyani ukuba kwiminyaka ethile bonke abantwana kufuneka bathethe ngaphandle kwengxaki kwaye ukuba akunjalo, omncinci unokufumana ukulibaziseka ekukhuleni kwentetho.
Njengomgaqo oqhelekileyo, umntwana kufuneka athethe amagama akhe okuqala kunyaka omnye ubudala. Ngeenyanga ezili-18, omncinci kufuneka abe nesigama samagama amalunga ne-100. Ukufikelela kubudala beminyaka emibini, isigama sityetyiswe kakhulu kwaye Umntwana kufuneka abe sele enamagama angaphezu kwama-500 xa ethetha. Oku kuqhelekile, nangona kunokubakho abantwana abanamagama anqabileyo kwaye anamagama ambalwa.
Ngeliphi ixesha kunokubakho ingxaki kwintetho yomntwana
Kungenzeka ukuba kukho ukulibaziseka ngolwimi, xa umntwana efikelela kwiminyaka emibini engakwazi ukudibanisa amagama amabini. Kukho ezinye iimpawu ezinokuthi zikulumkise kwiingxaki zolwimi ezinzulu:
Kwiminyaka emithathu ubudala umntwana wenza izandi ezizimeleyo kodwa akakwazi ukuthetha amagama athile.
Ayikwazi ukudibanisa amagama ukwenza izivakalisi.
Ayinakho ukubiza kwaye unokwazi ukuxelisa.
Kubalulekile ukubonisa abazali ukuba kwiimeko ezininzi Ulibaziseko ludla ngokuqheleka ekuhambeni kweminyaka.
Indlela yokukhuthaza ukukhula kolwimi ebantwaneni
Iingcali kwicandelo ziyacebisa ngokulandela uthotho lwezikhokelo ezivumela abantwana ukuba bakhulise ulwimi lwabo ngokugqibeleleyo nangokufanelekileyo:
Kuhle ukuba abazali bafundele abantwana babo amabali okanye iincwadi ngendlela eqhelekileyo.
Yitsho ngokuvakalayo amanyathelo ahlukeneyo ekufuneka enziwe ekhaya.
Phinda amagama ezisetyenziswa mihla le.
Kuyacetyiswa ukuba unikele ixesha elithile kwimidlalo yezemfundo apho ulwimi okanye intetho inendima ephambili.
Ngamafutshane, umxholo wentetho yenye yezo zihlala zixhalabisa abazali. Ukubona indlela abanye abantwana abakwazi ngayo ukuthetha amagama abo okuqala kubudala kwaye umntwana wakho engawenzi, kwenza abazali abaninzi boyike kakhulu. Khumbula ukuba umntwana ngamnye uyalidinga ixesha lakhe, ke kuya kufuneka uphephe ukuthelekiswa. Baninzi abantwana abalibazisekayo xa kufikwa ekuthetheni, kodwa kule minyaka idlulileyo, ulwimi lwabo luba ngesiqhelo kwaye bayakwazi ukuthetha ngaphandle kwengxaki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Oomama » Yonyana wakho » Ukulibaziseka kwentetho ebantwaneni
Izitshixo ezi-5 zokonga imeko yomoya kweli hlobo